Fantaro i Zotero, mpanampy amin'ny fikarohana manokana - Ikkaro
firosoana >> Software >> Zotero, mpanampy amin'ny fikarohana manokana
Zotero dia fitaovana maimaim-poana sy mora ampiasaina hanampiana anao hanangona, handamina, hitanisa ary hizara fikarohana.
Ny marina dia mitahiry fampahalalana marobe amin'ny endrika maro samihafa, pdf, sary, horonan-tsary, lahatsoratra, boky, sns. ary hitako fa tena sarotra ny mitandrina filaminana ary avy eo manana akaiky ny zava-drehetra rehefa ilaiko izany.
Alao an-tsaina hoe te-hanao fikarohana momba ny lohahevitra iray aho. Indray andro dia mahita taratasy ao amin'ny pdf aho, ny iray hafa dia manao sary mifandraika amin'izany aho, andro hafa aho mahita sary amin'ny Internet, andro hafa dia manoratra fanovozan-kevitra vitsivitsy na boky iray hamakiana fotsiny aho, na mailaka ifandraisan'ny manam-pahaizana momba io lohahevitra io.
Ary toy izany koa amin'ny fandehan'ny fotoana rehefa te hanoratra momba ireo lohahevitra rehetra ireo aho dia manana ny fampahalalana rehetra eo an-tànako.
Toa tsotra ity priori ity fa tsy nahavita nandamina azy tsara.
Nanandrana fomba hafa aho. Amin'ny fampiasana Evernote, Pocket, drafitra bilaogy, saingy ny zava-drehetra dia misy tsy fahampiana lehibe ary tsy manompo ahy amin'ny fomba fiasako izy ireo.
Ary ny fikarohana dia hitako Zotero, ary efa nisintona ny kofehy tamin'ny safidy maro hafa izay tsy fantatro akory.
Loharano misokatra https://github.com/zotero
Zotero ao anatiny. Ny fomba fampiasana
Ireto misy pikantsary sasany amin'ny interface interface amin'ilay fitaovana. Fa raha te hahita ny fomba fiasa ianao dia jereo ity horonantsary navelako etsy ambony ity dia afaka mahazo hevitra mazava kokoa ianao
Mizara telo ny fitaovana. Eo ankavia dia hitantsika ny tena firafitry ny fisie sy ny tranombokintsika
Ao afovoany izay aseho ao anaty lahatahiry dia aseho ary eo ankavanana dia hitantsika ireo angona sy metadata samihafa an'ireo rakitra.
Mamela endri-javatra maro hitantsika ao amin'ny horonan-tsary.
Azontsika atao koa ny manampy tag mba hampifandray ireo antontan-taratasy, naoty, sns.
Zotero dia mpanampy amin'ny fikarohana manokana. Fitaovana hanangonana, handrafetana ary hizara vaovao.
Efa ela no nitadiavako zavatra mitovy amin'izany
Avelako indray ilay horonantsary satria mieritreritra aho fa manompo antsika tsara kokoa ny mahita izay azontsika atao amin'ity fitaovana ity.
Ampidino ny Zotero
Miankina amin'ny système d'exploitation ampiasainao fa misy fomba samihafa hampidinana sy hametrahana azy.
Ampidiro ny fizarana fampidinana ao amin'ny tranokala ofisialy ary safidio ny rafitry ny fandidiana anao. Hisintona .exe ho an'ny Windows ianao, .dmg ho an'ny macOS ary ny extension extension ho an'ny Linux
Ho fanampin'ny fiasan'ny olana, misy fanitarana plugins lehibe ahafahantsika manampy fampiasa maro ary mampiasa zotero amin'ny faritra hafa.
Ka ohatra hitantsika fa misy plugins ho an'ny WordPress sy ho an'ny Drupal. LaTex sy Tex fampidirana. Miaraka amin'ny rindrambaiko statistika toa an'i RStudio.
Plugins hanatsarana ny fanafarana ary hampidirina fampiasa amin'ny kofehy. Tontolo iray manontolo izay manitatra hatrany hatrany.
Fampidirina miaraka amin'ny Google Scholar na Google Books
Midira raha hijery ny rehetra Plugins.
Izy io dia ny specialization ny fitaovana amin'ny maha manager bibliographic azy. Raha mpitantana bibliographique fotsiny no tadiavinao ho an'ny bokinao, thesis, sns., Dia azonao atao ny mizaha toetra fitaovana tsotra kokoa io.
ZoteroBib dia manampy anao hamorona bibliôgrafia eo noho eo avy amin'ny solosaina na fitaovana rehetra, tsy mamorona kaonty na mametraka rindrambaiko. Ampahafantarin'ny ekipa ao aorinan'ny Zotero anao izy, fitaovana fikarohana loharano mahery vaika natolotry ny anjerimanontolo an'arivony erak'izao tontolo izao, mba hahafahanao matoky azy hanampy anao hanampy loharanom-baovao tsy manam-paharoa sy hamokatra bibliografia tonga lafatra. Raha mila mampiasa indray ny endritsoratra amin'ny tetik'asa maro ianao na mamorona tranomboky fikarohana iraisana, dia amporisihinay hampiasa Zotero ianao.
Eto ny tranokala ofisialy
Zotero amin'ny Word sy LibreOffice
Iray amin'ireo safidy fampiasa indrindra amin'ireo rehetra manoratra ny TFG, ny thesis, ny thesis doctorat, sns.
Ny fampidirana ny Zotero amin'ny mpamoaka lahatsoratra ataonay, na Office Word na tonian-dahatsoratry ny rindrambaiko maimaimpoana toa ny LibreOffice dia mamaha ny fitantanana bibliografika sy fitanisana an'io karazana tetikasa io.
Io no fampiasana malaza indrindra amin'ity tetikasa ity. eto izahay dia manome azy io amin'ny fampiasana ankapobeny kokoa, manararaotra ny ampahany rehetra amin'ny fitantanana ny tetikasa sy ny fampahalalana izay tsy fantatra loatra
Manomana fampianarana manokana momba ny fametrahana sy fampiasana Zotero amin'ny Word sy LibreOffice aho
Zotero Connector ho an'ny Chrome sy Firefox
Ilaina io plugin na fanitarana io amin'ny tranokala raha toa ka hampiasa Zotero fatratra ianao, satria tsy misy zavatra ahazoana aina kokoa noho ny fitetezana rakitra na lahatsoratra iray mahaliana anao, kitiho ny sary famantarana ny browser ary voatahiry ho azy ao Zotero .
Alao an-tsaina ny Pocket fa mitazona azy ao anaty lahatahiry ny tetikasa.
Fa maninona no Zotero fa tsy hafa?
Mbola mitsapa azy aho, saingy nofidiko io satria mifanaraka tsara amin'ny filako mba hahafahana miasa miaraka amina endrika marobe.
Ary koa satria loharano misokatra izy io ary aleoko izy fa tsy vahaolana arahin'antoka.
Betsaka ary mila mandinika azy ireo ianao ary mijery azy ireo. Na dia eo am-piandohana aza aho manary ireo vahaolana an-tsokosoko, saingy apetrako ao anaty lisitra izany raha toa ka manompo anao izy ireo.
Ny safidy lehibe indrindra, Mendeley no be mpahalala sy fanta-daza indrindra, azontsika saika holazaina fa ny Zotero no mifandimby an'i Mendeley.
Inona no atao hoe Drupal
OKR (Tanjona sy valiny lehibe)
Sokajy Software Ticket navigation
2 Zotero ao anatiny. Ny fomba fampiasana
3 Ampidino ny Zotero
6 Zotero amin'ny Word sy LibreOffice
7 Zotero Connector ho an'ny Chrome sy Firefox
8 Fa maninona no Zotero fa tsy hafa?